20-ka Cayaartoy ee Koobka Aduunka cayaaraya kana tagaya Naadiyaashooda %
20-ka Cayaartoy ee Koobka Aduunka cayaaraya kana tagaya Naadiyaashooda
By Ramzi Yare	 Last updated Jun 12, 2018
Goal.com ayaa warbixin cajiib ah ka diyaarisay ku dhawaad 20 ciyaaryahan oo caan ah oo hada ciyaaraya koobka aduunka oo kooxohooda ka tagi doono inya lagu guda jira koobka audunka ama ka dib.
Antoine Griezmann ayaa ahaa nin doonayay ugu yaraan 18kii bilood ee la soo dhaafay in uu ku biiro Manchester United ,balse ma dhicin in uu u dhaqaaqo Old Trafford.
Isbedelka ku yimid Premier League sannadkii hore ayay ku guuldareysteen inay ku guuleystaan, halka Barcelona iyo Real Madrid ay labadoodaba soo galeen saxiixiisa.
Xiddiga reer France ayaa ku adkeysanaya in qorshihiisa suuqa kala iibsiga ee mustaqbalka dhow uu shaacin doono, lakiin waa hadii uu jiro mid ka mid ah inuu dhaco ka dib Koobka Adduunka ee Russia.
Wadahadaladii u dhaxeeyay Toby Alderweireld iyo Tottenham ayaa weli socda, iyadoo labada dhinac ayan awoodin in ay ku heshiiyaan xaaladda.
Xiddiga reer Belgium ayaa ka mid ahaa ciyaarayahanadii ka hoos shaqeeyay Mauricio Pochettino xili ciyaareedkii hore kooxda Spurs, lakiin waxa uu ku soo bilaawday kaliya 12 kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkii hore sababo dhaawac ah soo laabashadiisana wuxuu arkay inuu booskiisa u waayay Davinson Sanchez.
Haatan, iyadoo Alderweireld uu sannadka ugu dambeeya ee qandaraaska uu kula joogo kooxda Tottenham, Manchester United ayaa u muuqata mid u suura geli karta daafaca. Spurs ayaa heysta fursad ay ku sii dheereyn karto qandaraaska 29 jirkaan, inkastoo ay sidaas sameeyeen inay qandaraaska u kordhiyaan 25 milyan oo ginni ($ 33.5m / € 28.5m).
Michy Batshuayi ayaa dhameystirtay heshiiskii 2017-18 oo uu ku joogay Borussia Dortmund, isagoo dhaliyay 7 gool 10 kulan oo uu ka soo muuqday Bundesliga ka hor inta uusan dhaawic soo gaarin,wuxu amaah kaga maqanyahay kooxda Chelsea.
Hadda weeraryahanka Belgium waxaa lees weediinayaa hada miyuu joogayaa Stamford Bridge? mise wuxuu ka tagi doonaa galbeedka London ?
Kooxo badan oo Ligue 1 ah ayaa isku dayay inay la saxiixdaan Batshuayi sannadkii lasoo dhaafay, laakiin Dortmund ayaa ah kooxda fursadda ugu badan heesato ayadoo kaashanayso macalinkeeda cusub ee Lucien Favre.
Inkastoo uu seddex sano ku qaatay Madrid intii uu amaah ku joogay Atletico, islamarkaana caruurtiisa weli ku nool caasimada Spain, waxaa loo badinayaa in uu Thibaut Coutois ku biiri doono kooxda Real Madrid.
Goolhayaha reer Belgium ayaa qiray inuusan dooneynin inuu ku laabto magaalada uu kaga soo tagay qoyskiisa, iyadoo Real Madrid ay si xawli ah ugaarsato No.1 si ay u bedesho Keylor Navas.
Courtois ayaa hada galay sannadkii ugu dambeeyey ee heshiiskiisa uu kula joogo kooxda Chelsea.
Dagaalkii u dhexeeyay Lyon iyo Liverpool ee ku saabsaneed Nabil Fekir ayaa dhamaatay,ka dib markii ay labada dhinac uu soo kala dhexgalay khilaaf.
£ 60milyan ($ 80m / € 68m) ayaa Anfield kula soo saxiixatay xagaagan, waxa ay u muuqatay hubaal 24 jirkaan xagaagan baxayao , lakiin ka dib markii uu soo bandhigay ciyaaryahankii garabka ka ciyaara inuu burburay heshiiska ayay qof walba xaqiiqsatay in uu ku biiri doonin Liverpool.
Fekir ayaa 18 gool ka dhaliyay Ligue 1 xilli ciyaareedkii hore, isagoo 8 gool kale caawiyay iyo seddex gool kale oo uu ka dhaliyo tartamada Yurub ee Lyon ciyaartay , waxaana laga yaabaa inuu ka tago Lyon ka hor xilli ciyaareedka soo socda.
Loris Karius wixii uu sameeyay finalkii Champions League ayaa laga yaabaa inuu calaamad u noqdo dhamaadka mustaqbalkiisa Liverpool, isagoo tababare Jurgen Klopp uu si deg deg ah u dalbaday saxiixa goolhaye Alisson.
Goolhayaha reer Brazil ayaa la filayaa inuu ka hor mari doono Manchester City goolhayaheeda Ederson dooqa kowaad Koobka Adduunka xulka Brazil , qaab ciyaareedkii uu soo bandhigay xili ciyaareedkii hore ayaa sababtay in uu ka mid noqdo goolhayaasha ugu muhiimsan aduunka.
Keylor Navas ayaa ka caawiyay Real Madrid seddex horyaal oo isku xigta oo Champions League, lakiin waxa uu soo muuqday warar la isla dhexmarayay oo sheegaya in kooxdiisu ay iska fasixi doonto.
David de Gea iyo Thibaut Courtois, oo labadoodaba taariikh u leh kooxda ay xafiiltamaan ee Atletico Madrid, ayaa ah kooxda ugu cadcad inay keento Santiago Bernabeu, halka uu qorshaha qayb ka yahay goolhayaha Roma Alisson Becker.
Waxay ka fikiraysa iibka Navas, maadaama labada sano ee ka hartay qandaraaskii goolhayaha Costa Rica aysan u badneyn in uu sii joogo caasimada Spain waxa ay ku xiran tahay dhowr arrimood, inkastoo ay weli tahay macquul ah inuu helo koox cusub xagaagaan.
Wargeysyada suuqa kala iibsiga wax ka qora xididga ugu horeeya oo ay ka hadlaa xaaladdisa waa Cristiano Ronaldo oo labadinaayo in uu kooxda ka baxo.
Xiddiga Real Madrid ayaa loo balanqaaday inuu heshiis cusub u saxiixi doono kooxda ka dhisan Spain xilli ciyaareedkii hore, taasoo ah heshiis aan guuleesan Sidaasi darteed, Ronaldo ayaa sheegay wax yar ka dib markii uu ku guuleestay koobkii shanaad ee Champions League ay dhici karto inay soo afjaro .waqti badan uu joogay kooxda Real.
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa in ay tahay kooxda doonaysa laacibkaan in kastoo sidoo kale Ronaldo lala xiriirnaayo ku laabashada kooxdiisi hore ee Man United.
Ronaldo,ayaa dhaliyay 41 gool is kudarka kulamad uu ciyaaray La Liga iyo Champions League xilli ciyaareedkii hore.
Thiago ayaa Bayern kaga soo biiray Barcelona sannadkii 2013, waxaana uu sii wataa inuu ku guuleysto horyaalka Bundesliga mid kasta oo ka mid ah shantii xilli ciyaareed ee uu la joogay kooxda.
Tababaraha cusub ee Bayern Niko Kovac ayaa weli si buuxda u qiimeynaya kooxda ku dheesha Allianz Arena laakiin waxaa laga yaabaa inuu u ogolaado inuu Thiago ka tago xagaaga, sida ay sheegayaan wararka.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa seddex sanno ka hartay heshiiska uu kula joogo kooxda kaas uu saxiixay 2017,waxaa lagu heli karaa 70 milyan oo euros (£ 61.5m / $ 82m) lagu qiimeeyo ciyaaryahanka khadka dhexe.
kooxaha xiiseenaayo waxaa ka mid ah kooxdiisi hore ee Barcelona,ka hor inta uu ka soo tagin Barcelona wuxuu ku soo qaatay 10 sanadood waqtigii caruurnimadiisa ah.
Goolhayaha kooxda Paris Saint-Germain Kevin Trapp ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kaliya afar kulan oo horyaalka ah uu u saftay, iyadoo Alphonse Areola uu booskiisa u waayay xilli ciyaareedkii dhamaaday 2017-18.
Trapp, inkastoo uu macalinka Jarmalka Joachim Low u doortay inuu xulkiisa Koobka Adduunka ka mid noqdo hadana tababarihii hore ee kooxda PSG Unai Emery oo hada maamulka Arsenal ayaa la warinayaa in uu qorsha ku darsaday.
Emery ayaa wali baadi goobaya bedelka Petr Cech xagaagan, 27-sano jirka Trapp ayaa loo arkaa bedelka saxda ah ee Cech.
Laacibka heerka caalami ee dalka Jarmalka ayaa si weyn ugu dagaalamaya booskiisa Paris Saint-Germain Julian Draxler, oo eeganaya tababaraha cusub ee PSG Thomas Tuchel ayaa ka warqabaya taariikhda uu horay xiddigaan ugu sameeyay Bundesliga.
Weeraryahankii hore ee Schalke iyo Wolfsburg Draxler ayaa laga yaabaa in lagu soo bandhigo fursado ay ku bilaabi karaan marka loo fiiriyo heerkiisa inkastoo fursado badan uu ka heesto kooxo badan oo ka dhisan Yuru,laakiin waxaa loo badinaya in uu biix doono.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka France Thomas Lemar ayaa diirada u saaran kooxo badan oo Yurub ah.
Arsenal ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto xiddiga garabka uga ciyaara Monaco xagaagii lasoo dhaafay, laakiin waxa ay ku guuldareysteen inay dhameystiraan heshiiska ciyaaryahanka, halka Liverpool ay sidoo kale xiiso u qabto 22 jirkaan.
Lemar ayaa seddex xilli ciyaareed oo buuxa ku qaatay Monaco, waxaana ay u muuqataa inay xagaaga xagaaga soo aadan in uu bixi doono.
Hada wuxuu ka mid yahay xulka Les Bleus ee ka qayb ah koobka aduunka 2018.
Boca Juniors ayaa ku qiimeeysay Christian Pavon $ 30 milyan oo gani (£ 22.4m / € 25m) iyadoo kooxo badan oo reer Yurub ah ay raadinayaan inay u dhaqaaqaan xiddiga reer Argentina.
Arsenal ayaa weli xiiso u qabta inay la wareegto Zenit, ka hor inta uusan dalab rasmi ah u dirin 22 jirkaan, halka kooxaha Ligue 1 ee Paris Saint-Germain iyo Monaco ay sidoo kale ku jiraan tartanka
Labada koox ee Chelsea iyo Paris Saint-Germain ayaa raadinaya weeraryahan cusub si ay ugu wax fiican u sameeyaan xili ciyaareedka soo aadan ee 2018-19, Gonzalo Higuain ayaa ku haboon labadaba.
Juventus ayaa sidoo kale raadineysa fursadaha ay ku dooneyso weerarka waxaana ay u furan tahay in xiddiga reer Argentina uu ka tago Turin hadii ay dooneyso inay hesho bedelkiisa.
Hirving Lozano ee xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ku qaatay Europe ah ayaa wacdaro cajiib ah dhigay , isagoo 17 gool ka dhaliyey Eredivisie isagoo u dhaliyay goolka guusha ee PSV.
22 jirkaan heerka caalami ee dalka Mexico ayaa haatan bartilmaameed u ah kooxo dhowr ah oo Premier League ah, iyadoo Everton ay ka mid tahaykooxaha xiiseenaayo laacibkaan.
Agaasimaha cusub ee kubada cagta ee Marcel Brands, Chucky ayaa sannadkii hore keenay Netherlands, waxaana uu doonayaa inuu heshiis u saxiixo kooxda Goodison Park ka dib Koobka Adduunka.
Hordhaca: Da’yarada Soomaaliya & Sudan Oo…
XASAASI: Arintan Cadayn Ma U Tahay Soo Laabashada Neymar Ee…
Laacibka khadka dhexe ee kooxda Lazio Sergej Milinkovic-Savic ayaa la sheegay in dhamaadka xilli ciyaareedka 2017-18 ee Serie A. “uu ahaa maalinta ugu danbeesay horyaalka.
23 jirkaan reer Serbia ayaa xiiseynaya Jose Mourinho iyo shaqaalihiisa Manchester United muddo dheer, waxaa loo badinayaa in uu aadi doono Old Trafford ka dib Koobka Adduunka.
Michael Carrick iyo Marouane Fellaini ma joogi doonaan United sidaas darteet Milinkovic-Savic ayaa ah bdedelka saxda ah.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Croatia Mateo Kovacic ayaa 10 kulan oo La Liga ah ku bilowday xilli ciyaareedkii hore , taasoo keentay inuu ka hadlo ciyaaryahanka mustaqbalkiisa..
“Waxaan rumeysanahay inaan ciyaari doono wax badan, hadii Real ama meel kale,” ayuu u sheegay suxufiyiinta. “Haatan waa waqtigii aan ciyaari lahaa, waan ka mid ahay Real Madrid, waxaanan jeclaan lahaa inaan ka hadlo naadiyada kale.”
Kovacic ayaa weli ku sugan Real, inkastoo kooxo dhowr ah oo Premier League ah ay si weyn u doonayaan saxiixiisa.
Ki Sung-yueng – Swansea
Kabtanka South Korea Ki Sung-yueng ayaa haatan raadinaya koox cusub, isagoo ka tagay Swansea City dhamaadkii xilli ciyaareedkii 2017-18.
West Ham iyo Everton labaduba waxay xiiso u qabaan Ki waxaana ay raadin doonaan arintaan marka ay Koobka Adduunka dhamaado, halka kooxda Serie A ka dhisan ee AC Milan ay sidoo kale la socoto xaaladda 29 jirkaan.\_
Si aad u noqday ciyaaryahan heer caalami ah, waxaan u maleynayaa inaan u ciyaari doono koox ka sii fiican heer ciyaareed, “RB Leipzig weeraryahankooda Timo Werner ayaa hore u sheegay.
Laacibka heerka caalami ee dalka Jarmalka ayaa dhageysaneysay dalabyada labada kooxood ee kala ah Bayern Munich iyo Manchester United, kuwaas oo labadoodaba xiiseynaya 22 jirkaan.
Werner ayaa haatan diirada saaraya muuqaalkiisii ugu horeeyay ee Koobka Aduunka, inkastoo uu rajeenaayo in uu gaaro finalka ee Russia.
Xaaladda Neymar waa mid adag.
Keliya hal sano ka dib markii uu ku biiray kooxda Paris Saint-Germain, ciyaaryahanka reer Brazil ayaa xiiso xoogan ka helay Real Madrid ayagoo raadinaya bedelka Cristiano Ronaldo, hadii uu Portuguese uu go’aansado inuu ka tago caasimada Spain.
Inta badan waxay ku xiran tahay natiijooyinka kale ee ku jira gudaha kooxda, sida Ronaldo oo laga yaabo inuu ka tago, inkastoo PSG ay sheegtay inaysan dooneynin inay xiddiga reer Brazil ku fasaxaan koox kasta iyo xaalad kasta.
Xulka France Oo Dhaawac Ku Waayay Laba Daafac oo muhiim ah
Qiimeynta suuqa kala iibsiga ee koobka aduunka iyo xulka ugu qaalisan
Lambarka uu Franck Ribery u xiran doono kooxdiisa cusub ee Fiorentina oo la…